Juicy nge ushizi, okuphekwe ekhaya, kuvela ethambile okuningi futhi tastier kuka umkhiqizo okuthengiswa ezitolo. Kuyaphawuleka ukuthi dessert elimnandi kangaka, ikakhulukazi izingane. Kungaba ukunikeza ingane esikoleni ngoba isidlo eqotho. Uma nigcina yonke le mithetho elandelayo ukulungiswa, qiniseka ukuthi baphume ithenda kanye ngokoqobo ancibilike emlonyeni wakho namanzi ne ushizi. Flow Ishadi yogwadule kuhlanganisa izigaba ezilandelayo: izithako, nomkhombe inhlama inqubo ukugcwaliswa, obumba, ukwelashwa ukushisa futhi iphimbo elifanele. Ukuze izinto ezifanayo uzobe wachaza ngokuningiliziwe indlela ukwakha umkhiqizo amnandi.
Kanjani ukuthi uyenze eyakho nge kakhulu cottage shizi?
vanilla ushukela - amaphakethe 2 kuphela (yinye isivivinyo 1 ngokugcwalisa);
ufulawa kakolweni kuphela amamaki aphakeme - 350 g (6 spoonfuls enkulu ngokugcwalisa, kanti bonke abanye - kohlaka);
baking soda (ungakwazi ukukhokha off) - 1 isipuni encane;
inkukhu neqanda isilinganiso - PC 2 kuphela. (1 e inhlama 1 ku ukugcwaliswa);
omuncu ushizi angadle ngabuhle obutheni - 250 g (ekuzaliseni - 180 g, for the test - 70 g);
ibhotela fresh - 190 g;
ukhilimu obukhulu 30% - 8 nezinkezo ezinkulu (senzelwe ukugxusha);
ushukela - 260 grams (ekuzaliseni - 160 g inhlama - 100 g).
Ngaphambi ifomu nge-cottage shizi kakhulu, kahle uxove isisekelo esithambile. Kuze kube yimanje, endishini sihlanganise Iqanda liyadingeka, ibhotela kakhulu encibilikisiwe, cottage angadle ngabuhle obutheni, baking soda, vanilla ushukela. Govuza izithako kufanele kube inqobo kuze kuncibilike ngokuphelele okuxekethile umkhiqizo amnandi. Ngemva kwalokho, isisekelo ezidingekayo uthele ufulawa bese uxove kwesokudla plastic ethambile futhi inhlama olubucayi.
Juicy ushizi ngaphandle ukhilimu akuyona esithambile kakhulu futhi emnene. Ngakho sanquma ukuze ungeze lokhu umkhiqizo yobisi ku ukugcwaliswa. Ukudalwa kwawo kudingeka ukuba uhlanganise endishini izithako ezilandelayo: indawo omuncu cottage shizi, amaqanda, vanilla, ushukela, ufulawa kakolweni ukhilimu omuncu. Imikhiqizo kufanele ukugxambukela ngesipuni aze kuze inhlama eyohlobo.
Ngemva inhlama ukugcwaliswa ukuze uzilungiselele, kufanele uqale akhombe namanzi. Ngakho, isidingo phusha off kusukela phansi ucezu therefrom okusaqanda roll obuphelele 14 futhi ububanzi 8 amasentimitha. Ngesinye isigamu kwesigubhu liyadingeka ukubeka lo ukugxusha izaqheqhe e inqwaba nezinkezo, bese bevala ingxenye yesibili kanye lokunyathela onqenqemeni.
Lapho yonke imikhiqizo Semi-siphelile zilungele, kufanele ibekwe ngokucophelela eshidini bese indawo kuhhavini imizuzu 30-37. Emva kwalesi sikhathi, dessert kumelwe ungamumbi ikhaba nangaphakathi ungene ipuleti noma ipuleti esikhulu.
Juicy ushizi kungenziwa imakethwa njengoba ilungu lomndeni ku ashisayo futhi selehlile phansi ukwakha. Kukhona dessert self-ezenziwe Kunconywa ukusebenzisa cocoa, itiye noma ikhofi. Ikakhulukazi okumnandi namanzi futhi ethambile iba ngosuku olulandelayo emva nokulungiselela (uma behlale isikhwama).
Pasta: salmon noma yengulube
Indlela ukupheka sauce esihlwabusayo nge amakhowe
Stoptussin lehla - ikhambi jikelele ukhwehlela
Ukwelashwa nokuvikelwa ukuqwasha. hypnotics